Maxay qaramada midoobay ka tiri dadka sida qasabka ah looga musaafuriyay laascaanood? | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Maxay qaramada midoobay ka tiri dadka sida qasabka ah looga musaafuriyay laascaanood?
Maxay qaramada midoobay ka tiri dadka sida qasabka ah looga musaafuriyay laascaanood?
Hay’adaha Arrimaha Bani’aadannimada u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin xarigga iyo barakicinta khasabka ah ee in ka badan 1,000 isugu jira haween & carruur ay Somaliland kasoo musaafurisay magalada laascaanood ee Gobolka Sool 2-dii iyo 3-dii Bishaan.
Waxaa ay sheegeen inay wadaan isku –dubbaridayaan qiimeyn bani’aadamnimo oo deg -deg ah, si loo ogaado tirada dadka ay dhibaatadu saameysey, baahidooda degdeg ah si loogu helo meelo kumeel gaar ah, iyada oo lala kaashanayo maamulka Puntland.
“Waxaan aad uga walaacsannahay warbixinnada barakac khasab ah oo la qorsheeyay maalmaha soo socda, Waxaan ugu baaqeynaa hay’adaha samafalka inay bixiyaan oo dedejiyaan gargaarka degdegga ah, iyadoo lala kaashanayo maamullada maxalliga ah, si loo helo xal waara,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay hay’adda isku xirka arrimaha bini’aadanimada ee UNOCHA.
Ugu dambeyn Hay’adda UNOCHA ayaa ugu baaqday Somaliland in ay si taxaddar leh u dhaqmaan oo ay helaan xal waara oo lagu xushmeynayo xuquuqda iyo sharafta dhammaan dadka ay dhibaatadu saameysey.
Degaano ka tirsan Puntland sida Gobollada Nugaal iyo Mudug ayaa lagu soo dhaweeyay dadkii Somaliland kasoo musaafurisay Magaalada Laascaanood, waxaana warar soo baxay ay sheegayaan in Somaliland ay qorsheyneyso in degaano kale ay kasoo musaafuriso dad kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya.
Previous articleIn ka badan 3000 oo ah madaxda katholigga ee Faransiiska oo lagu eedeyay inay carruur faraxumeyeen